Culimada Ahlusunnah oo Cambaareesay Dumintii Maqaamka Sheekh Samaroon ee Boorame
Monday November 03, 2008 - 12:37:19 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Magaalada Boorame oo ka tirsan Magaalooyinka ugu waaweyn ee Somalland kana mid ah Magaalooyinka ayku fogtahay Xadaarada Diinta Islaamka ayaa waxa ka dhacay Fal laga Argagaxo kaasi oo lagu ciribtiraayo Raad Raaca Diinta Islaamka.
Falkaan Lagu Duminayo Maqaamka Weyn ee Sheekh Samaroon oo ah Mawlaca ay tahay xudun taariikhi ah oo ay ku Abtirsato Ahlu Dariiqa Qaastay Qaadiriyah ayaa falkani waxa geestay Sheelha Lagu Magacaabo C/llaahi Sheekh Cali Jowhar oo sheegtay in uu yahay Sheekha Baladka taasi oo xaqiiqda ka fog balse oo dhalay Sheekh Caanka ahaa Guud ahaan Gayiga Soomaaliye ee Sheekh Cali Jowhar.
Culimada ayaa Baaqaan Cambaareenta ah waxa ay sidoo kale uga digeen Kooxaha ku dhiira gelinayo Sheekhaan iyo raga la midka ah in ay bur buriyaan Xarumaha Diimeedyada Isla markaana dadka usheega in ay dumineen balse ay waji kale urogayaan iyagoo dhanka kale Maamulada ka arimiyo Deegaanada Falqadaha ay ka wadaan ka codsaday Culimada in talaabo Sharci ah ay ka qaadaan.
Sidoo kale Dadweynaha Reer Boorame iyo Guud ahaan Shacbiga Somaliland ayaa waxa loogu baaqay in ay ka jawaab celiyaan falalka guracan oo ay wadaan kooxaha rabsha iyo qilaaf doonka ah ay iminka bilaabay gacan ka hadalka.
Hadaba Dhamaan Culimada Ahlusunnah Meel kasta oo ay joogaan waxa ay Shacabka Soomaalin land iyo guud ahaan Soomaali weyn ugu Baaqayaan in laga foojignaado Qalqalka ay bulshada ku abuurayaan kooxaha Qilaaf Doonkaa ah ee Baryhaan kusoo badanaya Gobolka.
Maalintii shalay ayaa waxa ay Ciidamada Booliisku kala dhex galeen dadwayne taageersanaa qaar ka mid ah Culimada Qaadiriyada (Xerta) oo doonayay inaan la sii wadin dhismaha dayactirka lagu samaynayo Maqaamkii Sheekh Samaroon kuwaasi oo ku dacwoonayay inay Goobtan Mawlaca ay tahay xudun taariikhi ah oo ay ku Abtirsato qaar ka mid ah Qaadiriyada (Xerta).